Version 0.5.1 – Database ndozi
April 11, 2010 site na rịọ 2 Comments
Ọhụrụ a version solves nnọọ agadi nsogbu asusu kwuo okwu ogologo oge karịa 255 ihe odide. Mgbanwe a mere uwa na-agba, ma n'ezie na enwekwukwa ya nwere ezi-ekiri ndeksi ka dakọtara. Site na-arụ ọrụ na nchekwa data koodu anyị nakwa chọpụtara ụzọ iji mee ka ngwa mgbakwunye igosi ukwuu ngwa ngwa (tumadi mgbe APC caching e ji) ebe anyị na ugbu a, otu ọtụtụ translation gbara ajụjụ ndị nchekwa data otu njụ-ajụjụ.
A nta ahụhụ na translation textarea mkpado e-edozi ekele Timo.
Ka mgbe – na-atụ anya gị feedbacks.
Version 0.4.2 – Azịza?
January 26, 2010 site na rịọ 14 Comments
Gịnị bụ ajụjụ? Onye ọ bụla?
Eleghi anya, – A version support translation si Haitian? Ee
Eleghi anya, – Nwere ike Bing ịsụgharị iji igbanye akpaaka ntụgharị? Ee
Eleghi anya, – Ndi ị gụsịa optimizations ma belatara edemede nke na 1.5k mgbe gzipped (na kwukwara arụmọrụ)? Ee
Anyị na-atụ anya ka ị ụtọ nke a ka anyị na-eme.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: Bing (MSN) nsụgharị, obere, ọzọ asụsụ, tọhapụ, ọsọ nkwalite, WordPress ngwa mgbakwunye